Khaladaadka of Crypto Investors. Error 4 - Blockchain News
Goor hore in la iibiyo hantida crypto
Mid ka mid ah maal-aroor Seeraar, loo yaqaan SuperDuperDerp, sheegay Reddit sida uu dib ugu maal cryptocurrency ee 2012 marka qiimuhu $ 4. Waayo, $ 400 Yuusuf wuxuu soo iibsaday 100BTC. Laakiin inkastoo xaqiiqda ah in uu isla goobtii ku lug mawduuca cryptomarket helay oo ogaaday in Seeraar ku kici doonto lacag aad u badan, isagu ma uu samayn karin hantida uu muddo dheer. Sababta ahaa dhibaatooyin dhaqaale, iyo sidoo kale koritaanka daciif ah cryptocurrency ah. Sidaa darteed, marka heerka Seeraar u Laablaab gaartay $ 8 sumadda, wuxuu go'aansaday inuu iska iibiyo hantidii uu, rajeynaya in qiimaha sarrifka burburto lahaa oo wuxuu ahaan lahaa in aan dib-u-geli awood qiimo hooseeyo. Si kastaba ha ahaatee, this ma aysan dhicin …
Si aad joogtid madow ah, waa in aad raacdo saddex sharciyo fudud:
1. Waa kacaya laga bilaabo yar – cryptocurrencies weli waa kuwa aan technology cusub, iyo suuqa waa mid aad u kacsan, size ee maalgashiga fiicnayn waa in ka 1% si ay u 5%.
2. Ha iska iibiso si deg deg ah – xataa haddii maalgelinta ayaa koray by 20% ama 30%.
3. Ha argagixin – cryptocurrencies waa mid aad u kacsan, iyo heerka kala duwanaan karaa 20% si ay u 50% in maalin maalmaha ka mid.
Khaladaadka of Crypto Investors. Error 3 Khaladaadka of Crypto Investors. Error 5
2 Shirkadda bas weyn ...
Seeraar dhaafa Tag ...
Post Previous:Ethereum Foundation dhawaaqay qaata oo ka mid ah “ruxruxo ugu horreeya ee deeqaha” of $ 2.5 million
Post Next:Khaladaadka of Crypto Investors. Error 5
furtop ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 16, 2018 at 2:22 AM
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! Si kastaba ha ahaatee, how could we communicate?
Liepin ayaa sheegay in:
Eche ayaa sheegay in:
Stor ayaa sheegay in: